PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - UKhuzani uzotholana esitikini nezingwazi zaphesheya
UKhuzani uzotholana esitikini nezingwazi zaphesheya
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - CHARLES KHUZWAYO
ISIHLABANI somculo kamaskandi uKhuzani Mpungose sizoshiyelana inkundla nezingwazi zaphesheya kwiEssence Festival Durban e-ICC eThekwini. Kulo mcimbi, uKhuzani uboshelwe nomzwilili uJill Scott noBishop TD Jakes, okungamaciko ahlonishwa umhlaba wonke. Lo maskandi oshisa izikhotha kulezi zinsuku uthe uzosebenzisa ukunandisa kulo mcimbi ukuzikhangisa emazweni angaphandle.
“Nginxusa bonke abalandeli bakamaskandi ukuba baphume ngobuningi babo, ngifuna ukubona yonke imibala yemvunulo yabalandeli bamaqhawe kamaskandi ngoba angizimele kodwa ngimele umaskandi. Ngifuna abantu baphesheya bazi ukuthi singomaskanda siyesekana, ngiyazi abalandeli bami bazobe behlobe ngombala o-blue.”
UKhuzani uthe ukufakwa kwakhe kulo mcimbi kuyizinkomba zokuthi uyena umculi osahamba phambili kulezi zinsuku. “Kuyacaca ukuthi amagalelo ami aseyabonakala emhlabeni wonke njengoba i-Essence Festival kungumcimbi odume umhlaba wonke futhi okunandisa kuwo izihlabani zamazwe ngamazwe. Engikwenzayo sekuyabonakala.”
U2017 kubukeka kuwunyaka kaKhuzani njengoba esewine izindondo ezinhlanu okubalwa kuzo eyeBest Maskandi kumaSama Awards, eyeBest Song, Best Maskandi neyeBest Selling Album kuMantshontsho Kamaskandi Awards neyeLife Changers Awards.
“Ngisanda kuklonyeliswa ngeGold Disc ngenxa yokudayisa kahle kwe-albhamu yami Isixaxa Samaxoki. Kubuye kuxake ukuthi umculi athi uyadayisa kodwa angabi nayo iGold Disc,” kusho uKhuzani. Umcimbi uqala ngoSepthemba 26 uphothulwe ngo-Okthoba 1.
UJILL Scott uzocula kwi-Essence Festival Durban